एक दशकको उत्खननबाट के-के भेटियो तिलौराकोटमा ? – Saurahaonline.com
काठमाडौं । सन् १९९६ मा सरकारले विश्व सम्पदा सुचीमा राख्नका लागि प्रयास गर्न सकिने भनेर देशका सात स्थानलाई छनोट गर्यो । त्यसयताका २४ वर्षसम्म यस कार्यमा सिन्को पनि भाँचिएन । अहिले आएर बल्ल ती सातमध्येको एक तिलौराकोटलाई सुुचीमा सूचीकृत गर्नका लागि सरकारले तयारी थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेर सरकारले सूचीकरणको प्रकि्रयामा जाने पहल गरेको हो । यो प्रक्रियाअनुसार पहिले नामाङ्कन, त्यसपछि त्यो क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनुपर्ने आधार, त्यस क्षेत्रमा हुने वा हुन सक्ने व्यवस्थापनका तरिका लगायतका विवरणहरूसमेत युनेस्कोमा बुझाउनु पर्छ ।
प्रस्ताव गरेको एक वर्षमा नै लुम्बिनी विश्व सम्पदाको रूपमा सूचीकृत भएको थियो । तिलौराकोटलाई त्यतिबेला सम्भावित विश्वसम्पदामा सूचीकरण गरेको सरकारले थप प्रमाणहरू संकलन गरेर फेरि प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । सन् १९९१ को एउटा व्यवस्था अनुसार कुनै पनि मुलुकले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न कम्तीमा एक वर्ष पहिले नै सम्भावित विश्वसम्पदा सूचीको रूपमा युनेस्कोमा नाम टिपाउनु पर्ने हुन्छ । १९९६ सालमा पनि नेपालले तिलौराकोटलाई सम्भावित विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकरण गरेर यसको प्रमाण संकलन कार्य सुरु गरेको थियो ।
सन् १९९६ सालमा प्रस्ताव गर्दाको तुलनामा अहिले तिलौराकोटका बारेमा धेरै प्रमाण संकलन भइसकेको छ । प्राचीन शुद्धोधनको दरबार अहिलेको तिलौराकोट नै हो भन्ने धेरै प्रमाण संकलन गरिसकेको भए पनि यसको प्रकि्रया नै लामो रहेको पुरातत्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पीसी मुखर्जीले तिलौराकोटमा पहिलो पटक सन् १८९९ फेब्रुअरी ३ मा वैज्ञानिक उत्खनन गरेर प्राचीन यो कोटलाई शाक्य राजधानीको रूपमा पुष्टि गरेका थिए । उनले यो दरबार क्षेत्र दक्षिणदेखि उत्तरसम्म १,६०० फिट -४८७.६८ मिटर) र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १,००० फिट -३०४.८ मिटर) सम्म फैलिएको उल्लेख गरेका थिए । उत्तरबाट दक्षिणतर्फमा पर्खालको नाप ५०० मिटर रहेको, किल्लालाई घेरिएको र्‍याम्पार्टहरूमा सुदृढ रूपमा १२/८/२ इन्च आकारका इँटाहरु पाइएको र भित्ता १०/१२ फिट चौडाइको रहेको उत्खनन्को क्रममा पाइएको छ । बौद्ध धर्मशास्त्रले यसको उचाइ १८ फिटको रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रत्येक दिशामा सुदृढ पर्खालको साथमा चारवटा फाटकहरू रहेको समेत पत्ता लागेको छ । चारवटा फाटकमध्ये पुरातत्वविद्हरूले अहिलेसम्म दुईवटाको मात्रै खोजी गरेका छन् । पश्चिमी ढोका इँटा, इँटब्याट्स, काठ र फलामका सामग्रीहरुले बनेको पाइएको छ । एकपछि अर्काे ढोकाअनुसार यो मिलेर बसेको छ । पुरातत्वविद् टीएन मिश्रले गेटवे निर्माणका तीन चरणहरूको बारेमा बताएका छन् । उनले पहिलो र दोस्रो लेयरको समय ईपू दोस्रो र पहिलो शताब्दीको रहेको मानेका छन् ।
पी. सी. मुखर्जीले सन् १८९९ मा पूर्वी ढोका पत्ता लगाएका थिए । उनले ढोकाको नजिकै रहेको एक विशाल वर्गाकार भवनको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । जुन माथि ढाकिएको छैन । पूर्वी किल्ला पर्खालहरुको बीच भाग, जसलाई बुद्धको महाभिनिस्क्रमनद्वार वा मंगल द्वार भनेर चिनिन्छ । त्यही ढोका हो जहाँबाट राजकुमार सिद्धार्थ राजदरवारबाट बाहिर निस्किएका थिए ।
एनोमा नदी पार गरेपछि सिद्धार्थले आˆनो कपाल खौरिएर औपचारिक रूपमा भिक्षुको संसारमा प्रवेश गरेका थिए । त्यहीँबाट उनले घोडालाई पनि फिर्ता पठाइदिए । यसको उद्देश्य बोधिसत्वलाई विलासिताको संसारबाट बाहिर निकाल्नु र सही ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु थियो । उनले आफ्नो सारथि छन्दक र घोडा कन्थकलाई फिर्ता पठाए । घोडाले आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गरिसकेको थियो । त्यही कारणले पनि ऊ दरबारको प्रवेशद्वारमा प्रवेश गर्नुअघि आफ्नो प्राण त्याग गर्यो भन्ने विश्वास छ । पुरातात्विक उत्खनन्बाट यो स्तुपको समेत ऐतिहासिकता पत्ता लागेको छ ।
माटोका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडाहरू तिलौराकोटमा फेला परेका छन् । छैठौं शताब्दी ई.पू.देखि सुरु भएर आठौं शताब्दी ईसासम्मका पेन्टेड ग्रे वेयर, नर्दन ब्ल्याक पोलिस वेयर (एनबीपी वेर), कालो र रातो माटाका भाँडाहरू आदि भेटिएका छन् ।